नयाँ व्हाट्सएप अपडेट अधिक ब्याट्री खपत पैदा गर्न सक्छ आईफोन समाचार
नयाँ व्हाट्सएप अपडेटले अत्यधिक ब्याट्री खपत गर्न सक्छ
२ hours घण्टा पहिले आईओएस of को रिलीज भएपछि सब भन्दा धेरै अनुमानित अपडेटहरू आए। WhatsApp, सबैभन्दा प्रख्यात इन्स्ट्यान्ट मेसेजिंग अनुप्रयोग अन्ततः नयाँ इन्टरफेसमा रूपान्तरण भयो, केही आश्चर्यजनक उपस्थितिको साथ तर कम्तिमा नयाँ आईओएस, को साथ लाइनमा, यसको नयाँ कुञ्जीपाटी, र केही नवीनताहरूको साथ, सानो भए पनि। कि त हामीसँग आईओएस the को स्वचालित अपडेटहरू सक्रिय छन्, वा हामी नयाँ संस्करणको बारेमा उपलब्ध फेला पारेका छौं, निश्चित रूपमा नयाँ आईओएस स्थापना भएका सबै नयाँ व्हाट्सएप अपडेट गर्न हतार गरे, नयाँ इन्टरफेसको मजा लिन सक्षम हुनको लागि र उनीहरूको प्रदर्शनको पर्खाइका साथ। सुधार गरिनेछ। तर यस्तो लाग्दछ कि त्यहाँ एउटा समस्या छ जुन हामीसँग थिएन: अत्यधिक र खतरनाक ब्याट्री खपत.
मैले कम्तीमा पनि सामान्य भन्दा कम्तीमा अधिक उपभोग देखेको छु जुन पछिल्लो रात अपडेट भयो। म आफ्नो फोन5लाई २०% भन्दा बढि ब्याट्रीको साथ अपरान्ह सम्म पुग्न ब्यबस्थापित गरेको छु, यसको अत्यधिक प्रयोग नगरी, जब सामान्य अवस्थामा यो 20०% भन्दा बढि आउनुपर्दछ। र म मात्र एक हुँ जसले यसका बारेमा गुनासो गरेको छैन, किनकि तपाईले अनलाइन मात्र हेर्नु पर्छ, र यही कारणले गुनासो असंख्य छन्। यो समस्याको कारण के हुन सक्छ? हुनसक्छ अनुप्रयोगको «पृष्ठभूमि अपडेट।.
यदि हामीले हेर्दा व्हाट्सएपले अहिले सम्म कसरी काम गर्यो, जब हामीलाई सन्देश प्राप्त भयो, हामीलाई सूचित गरिएको थियो, तर जब हामीले यसलाई निवेदनमा प्रवेश गरेका छौं, हामीले सन्देश डाउनलोड हुन पर्खनु पर्‍यो। IOS of को नयाँ "पृष्ठभूमि अपडेटहरू" को साथ त्यस्तो होइन। व्हाट्सएपले पृष्ठभूमिमा यसको सामग्री अपडेट गर्दछ, र हामी अनुप्रयोग खोल्ने बित्तिकै हामी नयाँ सन्देशहरू पहिले नै तिनीहरूलाई हेर्न उपलब्ध छन्। तर यसले उच्च ब्याट्री ड्रेन निम्त्याउन सक्छ। म निश्चित रूपमा WhatsApp को "पृष्ठभूमि अपडेट" असक्षम पार्न कोशिस गर्दैछु र हेर्नुहोस् यदि मेरो खपत सामान्य छ। "नयाँ" व्हाट्सएपको साथ तपाइँको अनुभव के हो?
थप जानकारी - व्हाट्सएप अपडेट अब एप्प स्टोरमा उपलब्ध छ
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» नयाँ व्हाट्सएप अपडेटले अत्यधिक ब्याट्री खपत गर्न सक्छ
आज o'clock बजे मसँग १००% ब्याट्री थियो। At मा, र सेल फोनको कुनै पनि स्पर्श नगरीकन, यसको% 8% थियो। यो आज मलाई मात्र भयो, अन्य दिनहरूमा उही समयमा र उही प्रयोगको साथ, मसँग 100०-3% हुनेछ
सबै डाउनलोड सामग्री आइक्लाउडमा राख्दा समस्या आउँदछ। यदि तपाईंले यसलाई क्लाउडमा दैनिक अपलोड गर्नुपर्‍यो भने, त्यसो भए डाटा हरेक दिन फाल्छ।
साथै यदि तपाईं सेटिंग्स / आइक्लाउड / कागजातहरू र डाटा प्रविष्ट गर्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि व्हाट्सएप डाटा बचत गर्न अनुमति दिनुहोस् वा नगर्नुहोस्। अन्तिम विकल्प "मोबाइल डेटा प्रयोग गर्नुहोस्" केवल वाइफाइ प्रयोग गर्न र कम खपत गर्न असक्षम पारिएको हुनुपर्दछ, किनकि डाटा रेट पनि कुनै थोकमा उपभोग गर्न सक्दछ यदि used जी प्रयोग गरीन्छ भने।
Migarman लाई जवाफ दिनुहोस्
कहिलेकाँही यदि त्यो हुन्छ र मोबाइल एकदम तातो हुन्छ, केहि अनुप्रयोगले राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। तपाईको घाटा काट्नु र ब्याकअप लोड नगरीकन आईफोन पुन: संग्रह गर्नु उत्तम हुन्छ। यो समयको बर्बादी हो, तर यो प्रायः प्रभावकारी हुन्छ। कि त त्यो गर्नुहोस् वा एक पछि एक अनइन्स्टल गर्न को लागी कुञ्जी थिच्नुहोस्।
मसँग पृष्ठभूमि अपडेटहरू असक्षम गरिएका छन् र यसले धेरै ब्याट्री खपत गर्दछ, सम्भवत तिनीहरूलाई सक्रिय पारिएको भन्दा कम हो, तर यो सामान्य छैन।
Txopitodesnow लाई जवाफ दिनुहोस्
शुद्ध आनन्द प्रभाव ... मैले ठीक विपरित हेराई गरेको छु; अब यो पहिले भन्दा लामो समय सम्म रहन्छ, कमसेकम यो पृष्ठभूमिमा छ भने। त्यो तपाईं यसलाई हेर्न चाहानुहुन्छ र प्रत्येक टर्मिनलको परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। यदि यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ भने, सेटिंग्स / पहुँचमा भिन्नता बढाउनुहोस् र आईओएस the को गति बढाउनुका साथै तपाईं आफ्नो ब्याट्रीको स्वायत्ततामा एक सानो सुधार प्राप्त गर्नुहुनेछ।
त्यहाँ कुनै प्लेसबो प्रभाव छैन, तिनीहरू तथ्यहरू हुन्। मानिसहरु केवल अफवाह हो भन्ने सोच्न को लागी यति भेडछाड छैनन्। मसँग मेरो टर्मिनल १००% चार्ज गरिएको थियो, pm घण्टा पछि, कतै प्रयोगको साथ, मसँग 100 7% बाँकी छ, जब मसँग २०% बढी हुनुपर्दछ। तथ्य तथ्यहरू हुन्, र वास्तविकता यो छ कि यसले अधिक ब्याट्री खपत गर्दछ। यदि तपाईंले अन्यथा हेर्नुभयो भने, म खुशी छु, गम्भीरताका साथ, तर त्यहाँ अरु धेरै व्यक्ति छन् जसले अन्यथा भने।
म आफैंलाई दोहोर्याउँदछु किनकि म तपाईं मध्ये कसैलाई कसरी पढ्न थाहा छैन ... see प्रत्येक टर्मिनलको सर्कलमा डिपेंड गर्दै 5nd दोस्रो विमान अपडेटसहितको आईफोन has भएको व्यक्तिको व्हाट्सएप कसरी सक्रिय हुनेछ, १०० मा चमक %, ट्रान्सपरेन्सीहरू सक्रिय भयो ?, ... जी ... जुनसँग उही मोबाइल छ तर यी सक्रिय अपडेटहरू बिना, bright०%, at जीमा चमक र ट्रान्सपरेन्सीहरू मेरो केसको रूपमा निष्क्रिय पारिएको छ? ठिक छ, यो समान छैन। चाहे तपाईंलाई यो मनपर्‍यो वा छैन, आईओएस2आईफोनको लागि १००% अनुकूलित छैन र कुनै पनि अपडेट जुन बनाइएको हुन्छ त्यसले एक वा अर्को तरीकाले असर गर्छ।
कुनै पनि समयमा मैले यस पोष्टमा प्रवाहको बारेमा कुरा गरेको छैन, म ब्याट्री खपतको बारेमा कुरा गर्दैछु। स्पष्ट रूपमा, यदि तपाईंसँग आईफोन have छ, उदाहरण को लागी, यो S एस भन्दा बढी तरल पदार्थ हुनेछ (मेरो केसमा)। र म दोहोर्याउँछु कि हामी चारजना व्यक्ति हौं जसले ब्याट्रीको प्रदर्शनमा कमी देखेका छन।
हेरौं, म एक महिनाको लागि बेटा लिन भाग्यमानी थिएँ र मैले त्यसमध्ये कुनै पनि कुराको याद गरेको छैन, मलाई लाग्छ कि यो विशिष्ट scaremongering हो जुन तपाइँले भ्रमणको लागि गर्नुहुन्छ। माफ गर्नुहोस्, स्पष्ट हुनुमा तर यो मेरो विचार हो। मैले यस अवधिको साथ केहि देखेको छैन, र त्यस्ता व्यक्तिहरूको केससँग कम छ जुन २ hours घण्टा भन्दा कम पहिले अनुप्रयोगको अपडेटको लागि hours घण्टामा %०% खर्च गरे, त्यो यति सापेक्षिक छ कि यो मलाई समाचार स्वीकृत भएको जस्तो देखिन्छ।
म तपाइँको टिप्पणी संग सहमत छैन। मेरो केसमा, ss पछिल्लो वाट्सएप अपडेटको भन्दा लामो समयसम्म चल्‍यो, मैले धेरै उच्च खपत देखेको छु।
जुआन आर्चीला भन्यो
म पनि अत्यधिक खपत महसुस गर्दछु, दुई घण्टामा बिना प्रयोग म म २०% बाट २% तल जान्छु, त्यो कसरी हुने छ?
जुआन आर्चीलालाई जवाफ दिनुहोस्
जेभियर, तपाईं पागल हुनुहुन्छ। म कतै पनि भ्रमणहरू प्राप्त गर्न चाहन्नँ र म उही समस्या लिने मानिस जस्तो छ।
Nole लाई जवाफ दिनुहोस्
यो जेभियर बरु एक जोकर हो, हो निस्सन्देह M 350० मे व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताको कारण तपाईं जो एक हो जसले निर्णय गर्छ के हो र के हैन, किन कि यो तपाईलाई नहुनुको मतलब त्यो त्यस्तो छैन जस्तो होइन, तपाईले सोच्नु पर्छ अधिक र विश्वास गर्दैनौं ब्रह्माण्डको केन्द्र।
जोस एन्टोनियो ब्यारेरा भन्यो
घरमा आईफोनका साथ २ छन्, एउटा मध्यम प्रयोगको साथ अर्को अर्को अत्यधिक प्रयोगको साथ र हामी दुबैले ब्याट्री उपभोगमा कुनै फरक देखिन पाएनन्, जुन खुशीको अपडेट जस्तै हो।
जोसे एन्टोनियो ब्यारेरालाई जवाफ दिनुहोस्
ठीक छ, मेरो आईफोन S एसमा व्हाट्सएप अपडेटको साथ सक्रिय पृष्ठभूमिमा, ब्याट्री लामो समयसम्म चल्छ र एक दिनको एकल चार्जको साथ, बिहान यो १००% हुन्छ र बेलुका ११:०० बजे यो %०% बिना प्रयोग गर्दछ। आईफोन अब यसको प्रयोग गरेर मैले आईफोन 4:०० बिहान रिचार्ज गर्नुपर्दछ कि ब्याट्री %०% मा छ।
तपाईं यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न वा तपाईं जो बिहान लोड गर्नुहुन्छ र २ 23:०० बजे तपाईंसँग 00०% छ
फ्लिपीलाई जवाफ दिनुहोस्
ठिक छ, यो सत्य हो, र यो केवल एक मात्र होइन। ब्याट्री मेरो आईफोनमा 3-4- days दिन मेरो लागि रहन्छ। सूचनाहरू, स्वचालित चमक, वाइफाइ र ब्लुटुथ सँधै खुला रहन्छ, तर off जी बन्द; र म सधैँ खुला अनुप्रयोगहरू बन्द गर्न परेशान गर्दछु जब म तिनीहरूसँग कार्य गर्दछु।
मालोनीलाई जवाफ दिनुहोस्
आउनुहोस्, च्याम्पियन ... ऊँट परिवर्तन गर्नुहोस् कि उसले तपाईलाई बेचेको चीज एकदमै परिवर्तन भएको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि यदि तपाईको आईफोन4टर्मिनलको विशेषताहरूले भन्दा बढी लामो हुन्छ भने यो हुनेछ " जादू "वा अजि्गरले तपाईंलाई यो बैठक कोठाबाट दियो ..
Zas! सबै मुखमा।
ठिक छ, म गब्रिएलसँग सहमत छु।
मसँग १ बर्षसम्म आईफोन and छ र धेरै चोटि, म यो सुत्नु अघि राती चार्ज गर्छु र जब यो १००% चार्ज हुन्छ म सुत्न जान्छु। अर्को बिहान आईफोन अझै १००% ब्याट्रीको साथ छ (म about घण्टा सुत्दछु)।
उदाहरणको लागि, यो अन्तिम पटक मैले आईफोन चार्ज गरें, सोमबार, डिसेम्बर २। सोमबार देखि मंगलबार बिहान लगभग १२ - १ मा यो १००% थियो। अहिले १:१:2 बिहान, सोमबार र सारा म Tuesday्गलबार रात बिताएपछि, मसँग आईफोनको ब्याट्री 12 1% छ।
यो "कनेक्टिविटी" प्रविधिहरूको K भन्न लायकको छ तर मैले "केवल" enabled जी सक्षम पारेको छु। र मसँग २n विमान अपडेट अक्षम छ। मैले स्थान अधिक सक्रिय गर्ने अनुप्रयोगहरूमा मात्र सूचनाहरू पनि दिएका थिए। र मसँग अनुप्रयोग कन्फिगर भएको ईमेल कन्फिगर गरिएको k मात्र छ। साथै, प्रत्येक दिन जब म सुत्न जान्छु, मैले मेरो आईफोन "हवाइजहाज मोड" मा राख्दछु।
Manxete लाई जवाफ दिनुहोस्
PS समान विकल्पले भन्छ "यदि तपाईंले यो विकल्प निष्क्रिय गर्नुभयो भने तपाईंले ऊर्जा बचत गर्नुहुन्छ", यी शोका लागि एप्पलका शब्दहरू हुन्? यदि तिनीहरूले भन्छन् कि उनीहरूले यो त्यो तरीकाले बनाएको हो यो हुनै पर्छ र अहिले हुनुपर्दछ
मलाई उही कुरा भयो, आज बिहान 8 देखि म १००% चार्जको साथ उठें र १२ मा केहि मसँग २० थियो र यति धेरै ब्याट्री बाँकी छ जब सामान्यतया यो धेरै हुन्छ। त्यो समान विवरण मैले मेरो साथीलाई भने जोसँग मेरो जस्तै आईफोन S एस छ। : S आशा छ केहि चीज ठीक गर्नुहोस् र चाँडै अपडेट हुनेछ।
Bboy_javi लाई जवाफ दिनुहोस्
यसले सबै भन्दा बढी ब्याट्री उपभोग गर्दैन, वास्तवमा म यो हरेक आधा घण्टा WhatsApp मा औसत खर्च गर्दछ र केहि समान छैन, यो उल्लेखनीय छ कि म अपडेटको साथ शानदार छु, यो आवश्यक थियो कि उनीहरूसँग नयाँ टोनहरू हुनेछन्, अरूले पहिले नै बोर गरिसकेका थिए।
क्यामरलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यो पनि याद गरें कि अत्यधिक ब्याट्री खपत। यसले डाटा पनि खपत गर्‍यो। के अरु कसैले थाहा पाए कि त्यो डेटा खपत?
जुआन्माप्रो लाई जवाफ दिनुहोस्
मैले सम्पर्कहरू X स्थापित गरे र यो मलाई भयो, मैले यसलाई स्थापना रद्द गरेँ र ब्याट्री सामान्यीकृत भयो
Anraga लाई जवाफ दिनुहोस्
म बाबोसो पिउँछु भन्यो
ठिकै छ, म भन्न सक्दछु कि मैले हिजो बिहान यसलाई अपडेट गरेको थिएँ र आज मैले फोन १००% मा भएको प्रयोग गरें र मैले सामान्य रूपमा हरेक दिन जस्तै प्रयोग गर्‍यो र यो सामान्य भन्दा धेरै समय सम्म चल्थ्यो, यो भन्दा पहिले म यो अपरान्ह २ घण्टा चार्ज गर्थें, अब यो लामो समय सम्म चलेको छ र मैले सधैं गरेको जस्तै चीज गरें। सामान्य जनताको लागि मेरो राय यो हो कि यो उपकरणमा निर्भर गर्दछ र तिनीहरूसँग समय छ। मैले आज यो मेरो आईफोन s एसको साथ गरेँ, मैले 100s को साथ परीक्षण गर्नुपर्नेछ कि यो राम्रो छ वा प्रत्येक दिन उस्तै हो कि भनेर हेर्नका लागि।
बेबो बाबोशोलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग5एस छ र हो, यसले हिजो ब्याट्री खायो3घण्टामा ...
पुललाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई यो पनि देखिन्थ्यो कि मैले ब्याट्री छिटो निचोरेको थिए। मैले सोचें ती मेरा चीज हुन्। तर पोष्ट हेरेर मैले यो देखी सकेको थिएँ। मसँग सँधै पृष्ठभूमि अपडेटहरू असक्षम पारिएको हुन्छ। म अनुप्रयोग हटाउन र यसलाई पुन: स्थापना गर्ने प्रयास गर्न जाँदैछु।
मणिलाई जवाफ दिनुहोस्
मैले ब्याट्री प्रदर्शनमा कुनै प्रभाव देखेको छैन ... त्यो हो, मेरो आईफोन the मा संक्रमण, उदाहरणका लागि, कुराकानी विन्डो र च्याट सूची बीच, केवल दर्दनाक छ, बिलकुल चिल्लो छैन। यो पर्दा प्रभाव कि यो सहज छैन, यो ठेस खान को लागी जान्छ, मेरो ध्यान आकर्षित गरेको छ जो। यदि यो नभएको भए आधा विश्व (वा अधिक) ले व्हाट्सएप प्रयोग गर्दछ भने, म यसलाई मेटाउनेछु र म टेलीग्रामको साथ छोडियो, अधिक तरल पदार्थ र रोचक समाचारको साथ।
पिन्शोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईंहरू मध्ये जो वार्तालापको वार्तालापको सूचीमा फर्केर पछाडि पछाडि छन्, म यो विकल्पलाई सक्रिय गरेर समाधान गर्न सक्षम भएको छु: विकल्प / सामान्य / पहुँचमा कन्ट्रास्ट बढाउनुहोस्। शुभकामना
भेद्रालाई जवाफ दिनुहोस्
+१ तपाईंको लागि !!! मैले अन्ततः p ** o lag बाट छुटकारा पाउन सकें। यो कत्ति नराम्रो र कष्टप्रद देखिन्थ्यो! धन्यवाद भाई!
UveOne लाई जवाफ दिनुहोस्
कार्लोस, टाबास्को, MX भन्यो
अर्को चीजको लागि, यसले ल्याग हटाउछ तर लक स्क्रिनमा पारदर्शिता पनि हुन्छ (मतलब जब तपाईं लक स्क्रिनमा र अनलक आईफोन दुबै तल स्लाइड गर्नुहुन्छ), र सत्य "फेटिश" देखिन्छ।
कार्लोस, ट्याबास्को, MX लाई जवाफ दिनुहोस्
S एस संग मैले ब्याट्री जीवनमा कुनै कमी देखेको छैन।
वरोलोलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो S एस मा म पृष्ठभूमि अपडेट अक्षम है, अधिक बैटरी खपत याद गरेको छैन। म यसलाई सक्रिय बनाउन कोशिस गर्नेछु कि यसले अधिक खान्छ वा गर्दैन
माइनस S एस र अधिक एक्सेंटहरू।
धेरै राम्रो ... यो हुन सक्छ किनभने मैले आईओएस installed स्थापना गरेको छु, मैले गरेको पहिलो कुरा पृष्ठभूमिमा अपडेटहरू निष्क्रिय पारिएको थियो, अनुप्रयोगबाट होईन, होईन। म सबै अनुप्रयोगको लागि सीधा असक्षम छु। मैले सँधै सोच्दछु कि मोबाइलले केहि गर्न चाहन्न यदि मैले हेरिरहेको छैन भने के हुन्छ।
क, कम्तिमा मेरो लागि, यो ब्याट्री last - days दिनसम्म लगातार जारी रहन्छ जस्तो मैले आईफोन bought एक बर्ष पहिले खरिद गरें।
निश्चित!!! हिजो मैले :15:०० बजे काम छोडे 00 86% र :16:१:15 बिहान मैले 29 २% गरें !!! मैले मोबाईलको सबै समयमा वाट्सएप सन्देश पठाउन बाहेक प्रयोग गरेन। तपाईं त्यो कसरी खान्नुहुन्छ?
के आईओएस होइन जुन अपरेटि system प्रणाली हो जुन कहिले असफल हुँदैन र जहाँ तपाईका अनुप्रयोगहरूले त्रुटिहरू, लगहरू वा असफलता बिना राम्रो काम गर्दछ ???? (विडंबनाको अन्त्य) उनीहरूले आईओएस with का साथ के गरेका छन र यो आईओएस very मा धेरै सहज रहेको कसैले भनेको छ
Jevis लाई जवाफ दिनुहोस्
के यो संग यसको के गर्न को छ? यो WHATSAPP समस्या हो ... यदि यो हुन्थ्यो भने यो सबै अनुप्रयोगहरूसँग हुने थियो ... ट्रोल गुफामा फिर्ता जानुहोस्।
यो मात्र शक्ति बन्द अभाव एन्ड्रोइड को विशेषता को अभाव छ hahahahahaha त्यसो भए तपाईं आफ्नो ट्रोल लुकाउनु पर्छ भने
धिक्कार छ तपाईंको एफसी एन्ड्रोइड एह!…।
तपाइँ कम्पुटरको पछाडि कती ठ्याक्कै पुग्नुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईंसँग आधा "पन्जा" पनि छैन।
मानिस, कर्तव्यमा मूर्ख बाहिर आए, यसले लामो समय लिएको थियो ...
हैन, कर्तव्य मा मूर्ख तपाईको आमाको को… को बारे मा १। वर्ष पहिले आएको थियो, जुन तपाईले प्रतिनिधित्व गर्ने मानसिक उमेर हो।
वा तपाईं जस्तै
तर यदि तपाईं एक्लै काम गर्नुहुन्छ भने, अपमान गर्नुहोस् किनभने तपाईं स्मार्टस थ्रेडमा केही योगदान गर्नुहुन्न, र च्याम्पियन अपियरन्सको लागि बाहिर हेर्नुहोस्।
तपाईं त्यो स्तब्ध अनुहारको साथ योगदान गर्नुहुन्छ।
लग्स अनुप्रयोगमा त्रुटि हो, ट्विटरमा उनीहरूले पहिले नै भनेका थिए कि तिनीहरू द्रुत अपडेटमा काम गर्दैछन्, र ती नयाँ मेजर अपडेटमा नयाँ अविश्वसनीय सुधारको साथ पनि काम गरिरहेका छन् ... यी सबै एक बेटा टेस्टरको अनुसार।
ठीक छ, मेरो आईफोन yours तपाईंको सबै भन्दा धेरै लामो समय सम्म रहन्छ
एर्नलोकोलाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग .4.०..7.0.4 को साथ s एस छ, र ब्याट्री सामान्य प्रक्रियामा धेरै राम्रो गरिरहेको छ, र यदि म निष्क्रिय भए र वाई-फाई / 3G जी संग संगीत बजाउन वा सुन्न सुरु गरें ... ०% ... त्यो हो मलाई थाहा छैन यदि यो केवल मेरो हुनेछ भने, तर जब फोन १०% पुग्छ, यो 0०% देखि ११% सम्म रहन्छ, अविश्वसनीय ...
स्थानीयकरण पनि असक्षम गरिनु पर्छ, पूर्वनिर्धारितद्वारा यो सक्षम पारिएको छ।
गोपनीयता -> स्थान।
एक आईफोन4मा मैले व्हाट्सएपको अपडेटबाट मात्र हेरेको छु, वास्तवमा मैले यसका लागि खोजी गरें यदि यो मलाई मात्र भयो भने। पृष्ठभूमि अपडेटहरू असक्षम पार्ने र मिगर्मनले के भन्छ भन्ने बारे राम्रो विचारहरू:
You यदि तपाईं सेटिंग्स / आइक्लाउड / कागजातहरू र डाटा प्रविष्ट गर्नुभयो भने तपाईंले देख्नुहुनेछ कि व्हाट्सएप डाटा बचत गर्न अनुमति दिन वा नदिन। अन्तिम विकल्प "मोबाइल डेटा प्रयोग गर्नुहोस्" केवल वाइफाइ प्रयोग गर्न र कम उपभोग गर्न असक्षम पारिएको हुनुपर्दछ, किनकि डाटा रेट पनि कुनै थोकमा उपभोग गर्न सक्दछ यदि used जी प्रयोग गरीन्छ भने। "
असम्2भन्यो
हिजो मैले सामान्य भन्दा धेरै नै धेरै ब्याट्री ड्रप गरेको देखें, र जब मैले तपाईंको लेख पढें भने म सोच्दछु कि यो व्हाट्सएपको चीज हुनेछ, तर आज मैले आईफोनलाई यस्तै प्रकारले प्रयोग गर्‍यो र ब्याट्री जहिले पनि टिकाई रह्यो।
म कुनै पनि निष्कर्ष कोर्न सक्दिन, तर म होशियार रहन्छु
असम्प २ लाई जवाफ दिनुहोस्
विचार विमर्श संग केहि पनि, तर मँ एक डब छ, के समस्याहरु संग सुधार गर्न सकिन्छ, जेल छ?
म तिमीलाई मेरो अनुभव बताउँछु;
बिहीबार मैले आईओएस .7.0.4.०..XNUMX अपडेट गर्ने निर्णय गरे ओटीए मार्फत एकै समयमा व्हाट्सएपलाई पछिल्लो संस्करणमा अपडेट गरियो।
शुक्रबार, मेरो ब्याट्री १ दिन मात्र चल्यो (जब सामान्य र समान परिस्थितिमा यो २ दिनसम्म रहन्छ), खतरनाक हो र सामान्य ड्रपको साथ हुँदैन।
सुरुमा मैले सोचे कि यो आईओएस .7.0.4.०. update अपडेट हो तर यो पोस्ट पढ्दा मैले पहिले नै मेरो दिमाग हराइसकेको छु किनकि मलाई थाहा थिएन कि अत्यधिक खपत कहाँबाट आउँदछ।
के मैले प्रयास गरेको छु (र यो क्षणमा यो राम्रो हुँदै गइरहेको छ जस्तो लाग्दछ) व्हाट्सएप मेटाउन र रीसायकल बिनमा छोडेको .ipa फाइलको साथ अघिल्लो संस्करण स्थापना गर्नु हो (बिच यो हो कि यसले मलाई पुनः भण्डार गर्न दिदैन ब्याकअप मैले आईक्लाउडमा बनाएको थिएँ, तर मसँग पहिले नै त्यस्तो सम्भावना रहेको छ), त्यसैले अब म आईओएस .7.0.4.०.। र व्हाट्सएप २.११.। को साथ छु र यो कुरा अपडेट हुने जस्तो देखिन्छ।
अब म यी बगहरू सच्याउनको लागि अद्यावधिक संस्करणमा प्रतीक्षा गर्नेछु जुन मेरो ब्याट्री उपभोग गर्दैन।
महत्वपूर्ण तथ्य: मसँग पृष्ठभूमि अपडेटहरू कहिल्यै सक्रिय छैनन्, त्यसैले म यो नियम बाहिरबाट आउँछु कि ब्याट्री खपत यसको कारणले आउँछ (कम्तिमा मेरो मामलामा)।
सबैलाई बधाई र ब्लगमा बधाई हो।
बारकोडिडलाई जवाफ दिनुहोस्
एन्टोनियो कपडा भन्यो
ठीक छ, मैले अपडेट स्थापना गर्ने बित्तिकै, ब्याट्री खपत आकाश गएको छ। मलाई थाहा छैन के कारण हो, तर यो वास्तविक हो ...
एन्टोनियो लिननेरलाई जवाफ दिनुहोस्
हिजो मैले भर्खरको ios7 मा अपडेट गरें र अब पूर्ण ब्याट्री चार घण्टा भन्दा कममा खाइन्छ त्यसैले हो, मलाई लाग्छ कि नयाँ अपडेटसँग के गर्नुपर्दछ। म के हुन्छ भनेर हेर्न पृष्ठभूमि अपडेटहरू असक्षम गर्ने प्रयास गर्दैछु
Monyfc7@hotmail.com लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको ब्याट्री क्यालिब्रेट गर्नुहोस्
पपलाई जवाफ दिनुहोस्
पीडीएफ विशेषज्ञ,, रिडडलबाट नयाँ पीडीएफ कागजात प्रबन्धक
जब यो पुरानो उपकरणहरू समर्थन गर्न आउँदछ, आईओएस ले एन्ड्रोइड हटाउँछ